Mitaky Ny Famotsorana Ilay Mpikatroka Mpiaro Ny Zon’ny Fananan-tany Kambodziana Tep Vanny Ny Fikambanana ONG Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2017 4:07 GMT
Ireo mpanohana an'i Tep Vanny mitaky ny famotsorana azy. Sary tao amin'ny LICADHO, vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao Kambodza.
Fikambanana firaisamonim-pirenena (CSOs) miisa 65 raha kely indrindra miampy ireo fikambanana tsy miankina (ONG) manerana izao tontolo izao no efa nanao sonia ny fanambarana iraisana izay manery ny governemanta Kambodziana mba hamotsotra ilay mpikatroka mpiaro ny zon'ny fananan-tany Tep Vanny, efa notànana nandritra ny 12 volana.
Mpikatroka mpiaro zon'olombelona malaza nanao fanentanana tamin'ny anaran'ireo tantsaha voahilikilika sy ireo tompontany majinika nesorina tao Kambodza i Tep Vanny. Nosamborina izy tamin'ny volana Aogositra 2016 noho ny fitarihana ny fihetsiketsehana ‘Alatsinainy Mainty’ izay nokarakaraina mba hitakiana ny famotsorana ireo mpiaro ny zon'olombelona miisa dimy voampanga ho nitsabaka tamin'ny raharaham-panjakana nahatafiditra mpitarika ny mpanohitra.
Nanameloka an'i Tep Vanny ny fitsarana noho “ny faniratsirana ny manampahefana iray ” ary notànana enina andro tany am-ponja izy. Saingy nandritra ny fitazonana azy dia namelona indray ny raharaha nitarihany hetsi-panoherana teo anoloan'ny tranon'ny praiminisitra noho ny fandroahana ireo mponin'ny Farihy Boeung Kak tamin'ny taona 2013 ny governemanta. Nanala ny mponina an'arivony manodidina ny faritra ny tetikasan'ny governemanta hanatsarana ny Farihy Boeung Kak, ao an-drenivohitra Phnom Penh .
Tamin'ny 23 febroary 2017, voaheloka i Tep Vanny noho ny “herisetra niniana natao tamin'ny fanaratsiana ny toe-java-misy” nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2013, ary nahazo sazy an-tranomaizina roa taona sy enim-bolana izy.
Ny 8 Aogositra 2017, nanamafy ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanamelohana an'i Tep Vanny ny fitsarana. Notaterina ihany koa fa mety hiatrika fitsarana fahatelo i Tep Vanny noho ny raharaha iray hafa nifandraika tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2011 tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Farihy Boeung Kak .
“Na dia aty am-ponja aza aho sady asiana rojovy ny tànako ary manao fanamian'ny gadra, ny zavamisy dia tsy manantsiny aho.”
Ny fitazonana maharitra an'i Tep Vanny dia hitan'ireo mpikatroka sasany ho isan'ny drafitry ny governemanta mba hampanginana ny mpanohitra sy hanaparitahana fandrahonana eo amin'ny vahoaka amin'ny fotoanan'ny fifidianana taona 2018. Nandritra ny telopolo taona lasa no efa teo amin'ny fitondrana ny antoko mpitondra ao Kambodza , saingy namotsotra seza marobe izy ireo tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2013 .
Nampitandrina ny fanambarana iraisana nosoniavin'ny CSOs miisa 65 sy ny fikambanana ONG fa ny fitazonana an'i Tep Vanny dia midika “fandraisana anjara amin'ny fampitahorana ny mpiaro ny zon'olombelona manerana an'i Kambodza.” Nanamafy ihany koa izany fa tsy tokony hatao heloka bevava ny fanoherana sy ny fikatrohana am-pilaminana;
Noho ny fanagadrana azy, nosakanana tsy hanohy ny asany milamina sy sarobidy amin'ny maha-vehivavy mpiaro ny zon'olombelona azy i Tep Vanny. Tsy heloka ny hetsi-panoherana am-pilaminana sy ny fanehoan-kevitra fanoherana, ary tsy tokony ho voasazy noho ny fampiharana ny zon'olombelona ny mpiaro ny zon'olombelona.
Nanamarika ny Zaikabe Aziatika miaro ny Zon'Olombelona sy ny Fampandrosoana fa mandika ny fenitra iraisampirenena ny fitsarana an'i Tep Vanny :
Noho ny antony ara-politika no nahatonga ny fiampangana natao tamin'i Tep Vanny sy ny fitazonana azy tsy ara-dalàna mba hampanginana sy hamerana ny fikatrohany amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Tsy mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena isian'ny fitsarana ara-drariny izany fitsarana izany .
Ankoatra ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao an-toerana dia nanao fangatahana fanangonan-tsonnia tany amin'ny biraon'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana sy ny masoivoho isankarazany ao Kambodza ireo mpikatroka sy ny mponina ao amin'ny Farihy Boeung Kak mba hitady fanampiana amin'ny fanerena ny governemanta Kambodziana amin'ny famotsorana an'i Tep Vanny.
Narisika tamin'ny fanoloana ny sarin'izy ireo tamin'ny sarin'ny fanentanana ihany koa ireo mpisera ny media sosialy ao Kambodza .